Google Optimize fandefasana ho an'ny mpivarotra amin'ny fitsapana | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 1, 2016 Sabotsy, Desambra 3, 2016 Douglas Karr
Google Optimize dia natomboka tamin'ny beta ho an'ny vondrona mpampiasa voafetra. Afaka nanao sonia sy nanao fitsangatsanganana an-tsehatra androany aho ary ny hany azoko lazaina dia - wow. Misy antony 3 hinoako fa hanakorontana be eo amin'ny tsenan'ny fitiliana ity. Raha ny tena izy, raha sehatra fitsapana aho dia mety hiala matetika izao.
The Mpampiasa interface dia mifanaraka amin'ireo sehatra hafa toa ny Google Tag Manager sy Google Analytics, ka raha nampiasa ireo sehatra ireo ianao dia hahita rivotra mamakivaky ny Google Optimize.
Miorina tsara ny sehatra Google Analytics, ahafahanao mampiasa ny angona tranokala Google Analytics misy anao hamantatra haingana sy mora ireo faritra ao amin'ny tranokalanao izay azo hatsaraina.
izany maimaim-poana. Misy endri-javatra fanampiny azo alaina amin'ny Google Optimize 360 ​​- toy ny kendrena ho an'ny mpihaino, fanandramana multivariat tsy misy fetra, tanjon'ny fanandramana Ad hoc, fahaiza-manao andrana miaraka, serivisy fampiharana, fifanarahana eo amin'ny serivisy.
Tahaka ireo sehatra fanatsarana sy fanandramana hafa rehetra, Google Optimize dia mampiasa maodely statistika mandroso sy fomba statistika Bayesian hanome modely ny andrana nataonao. Google Optimize dia mampiasa fitaovana fitadiavana be pitsiny toy ny fikendrena fanandramana mandroso mba hahafahanao mampita ny traikefa mety amin'ny mpanjifanao amin'ny fotoana mety.
Azonao atao ny manangana test A / B, Test Multivariate, na Redirect Test:
Mila Google Chrome sy a ny sehatra Google Optimize napetraka extension… fa noho ny antony tsara. Raha tokony hikaotika ny lalanao amin'ny alàlan'ny singa kaody sy pejy ianao, ny fanitarana dia mamela anao hisintona sy hanavao ireo singa ilaina fotsiny.
Izany no nohavaozina Tranonkala maso namboarina tamin'ny WordPress misy ambadika horonantsary… ary tsy misy olana amin'ny fampiasana Google Optimize! Aza hadino ny misoratra anarana!
Ny tatitra dia manome valiny sy famakafakana lalandava ny andrana nataonao rehetra.
Midira ho an'ny Google Optimize
Tags: ab testingfanandramanagoogle optimizerfitsapana googlefanandramana marobeOptimizationfanandramana tranonkalafitiliana
Taranaka fampahalalana: mahatratra olona an'arivony taona amin'ny alàlan'ny fomba fitadiavana data
Dec 2, 2016 amin'ny 4: 24 AM
fanamarihana fotsiny: "Google Optimize" io, fa tsy "Google Optimizer" - azonao atao ny manitsy izany.
3 Desambra 2016 à 9:25
Christof tsara! Misaotra!